January 2019 – Bachan Tv
Posted on January 29, 2019 January 29, 2019 by BACHAN TV
Posted in Articles2 Comments on सुव्यवस्थित परमेश्वरको राज्य
कुटिकुटि मारेका डिआर थुलुङ यसरी बाँचेथिए
सुसमाचार सुनाउँदा पाता कसिदियो
Posted on January 28, 2019 January 28, 2019 by BACHAN TV
नेपालमा ख्रीष्टियन वढ्नुको कारण डलर हो त ?
Posted on January 26, 2019 January 26, 2019 by BACHAN TV
रातोपाटीमा प्रकाशित लेखप्रति हाम्रो प्रतिक्रिया
Posted on January 25, 2019 January 25, 2019 by BACHAN TV
लेखक मित्र, तपाइँले गरेको कोसिस ठीकै हो र केही मात्रामा तथ्यपरक पनि हो । तर साम्प्रदायिक हिसाबले कुनै धर्मलाइ लान्छना लाउनुपहिले अाशाराम वा रामरहिमजस्ताको बारेमा विचार गर्नुभए तपाइँको चस्माले समानता देख्न सक्थ्यो ।
पब्लिसिटी स्टन्ट हो भन्ने कुरा त तपाइँको लेखाइको भावले देखाउँछ ।
देशको उन्नति र प्रगतिको बारेमा बालै भएन । सुन काण्ड वा वाइडबडीको कुरा सामान्य भो तर संसारको अर्को कुनामा भएको घटना लिएर हुनै धार्मिक समुदायलाइ एउटै डोकोमा हालेर लेख्दा तपाइँले नै भन्नुभयो कि कारबाहीको प्रकृया सुरु भएको छ र पोपले पनि माफी मागेका छन् । अन्य धर्मसम्प्रदायका अगुवाहरूलाइ कारवाही भएको वा अगुवाले माफी मागेको कुरा पनि कतै जानकारी भए ? कुनै धर्म सम्प्रदायलाइ म यहाँ हिलो छ्याप्न चाहन्न । तिखा कमेन्ट र धम्कीको भाषा येशूको अनुयायीले प्रयोग गर्दैन ।
इसाइहरूले जब्बरजस्ती वा पैसा दिएर धर्मपरिवर्तन गर्छन् भन्ने कुरा पुरानो भैसक्यो । लाै, तपाइँ र म सँगै बसाैं । मलाइ बुझाइदिनुहोस् कि कसले कसैको अास्था किन्न वा बेच्न सक्छ । जब्बरजस्तीमा कसैको अास्था परिवर्त हुँदैन । अरे यार, कति कमजोर कुरा गरेको ? हावा कुरा गरेर चर्चित हुनु र वास्तविकता फरक हो । तपाइँजस्ता सचेत पत्रकारले जान्नुपर्छ कि सबै धर्म समुदायको सम्मान गर्नु राज्य र तपाइँ अनि मेरो दायित्व हो । विज्ञान, प्रविधि र उन्नतिको कुरा छाडेर धर्मजस्तो भावनात्मक कुरामा समाजलाइ अल्मल्याएर पछाैटे बनाइरहनु कस्को स्वार्थ हो ? छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् त, हामी एक्काइसाैं शताब्दीमा यो वा त्यो धर्म भनेर अल्मलिरहने वा अघि बढ्ने हो ? अर्को दश वर्षमा पनि हामी यही धर्मको नाममा लडिरहेका हुनेछाैं, विश्वले चन्द्रमामा मानव बस्ती बसाउने कुरा गर्दा वा अार्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगमा व्यापकता अाउँदा । एउटा र अर्को छिमेकी धर्मको नाममा लडिरहेको देख्न चाहने तपार्इंको सपना हो ?
केही समयपहिले सोल्टीमा भएको कार्यक्रममा जब्बरजस्ती हामी नेपाली ख्रीष्टियनहरूलाइ घिसार्ने कोसिस गर्दा तपाइँले कति कमजोर अध्ययन गर्नुभएको छ भनेर थाहा हुन्छ । युनिफिकेसन चर्चसित क्याथोलिक वा प्रोटेस्टेन्ट समुदायको गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । नेपालको कुनै पनि चर्चका अगुवा सोल्टीमा गएका थिएनन् । अन्य धर्म सम्प्रदायका अगुवा किन गए, हामी सबैलाइ थाहै छ । साेल्टीको खाना र स्वागतमा सबै मख्ख अनि बेकारमा दोष किन नेपाली इसार्इ समुदायलार्इ । अलिकति मात्रै अनुसन्धान गरेको भए तपाइँलार्इ थाहा भैहाल्थ्यो नि । कोठामा बसेर गुगलको भरमा लेख्नु खतरनाक छ है ।
डिल्लीमा रहेको समाधिस्थल जस्तै नेपालमा चाहिने
मृगौला पिडित सहयोगको अपिल
Posted on January 24, 2019 January 24, 2019 by BACHAN TV